mitovy ve ny tsaramaso navy sy ny tsaramaso avaratra
taco atsobaka miaraka amin'ny hen'omby
mangatsiaka artichoke milentika fanosotra marikivy fanosotra
sandwich tsara indrindra eto akaikiko
inona no hotompoina amin'ny zucchini nendasina
Ny Casseroles dia safidy sakafo mora sy matsiro izay hamonjy fotoana sy lovia ho anao! Manomboka amin'ny kaserola tsaramaso maintso ka hatramin'ny kaserôla ovy, andramo ny sasany amin'ireny!
Ireto mahandro sakafo mahandro sy Crockpot ireto dia hanampy anao amin'ny famoronana sakafo matsiro sy an-trano ary sakafo fampiononana nefa tsy mijoro eo alohan'ny fatana!
Ny lisitra tsara indrindra ho an'ny mpanamora sakafo ho an'ny vahoaka! Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?tit= Manomboka amin'ny mpampangatsiaka mangatsiaka mora ka hatrany amin'ny mpampialoka sakafo maivana alohan'ny sakafo hariva (na ny sakafo hanina farany aza) dia natafanay ianao!
Ity fanangonana sakafom-pisakafoanana Instant Pot sy cooker ity dia sasany amin'ny resipeo haingana sy mora ankafizinay - manomboka amin'ny taolan-tehezana ka hatramin'ny amboara sy lasopy!
Mpandresy sakafo hariva akoho mpandresy! Ireo fomba fahandro akoho mahavariana ireo dia ho lasa sasany amin'ireo tianao vaovao… Fantatro fa ahy izy ireo!
Ity fanangonana lovia mora sy matsiro ity dia hanampy anao hampiakatra ny sakafonao manaraka na fiaraha-misakafo hariva miaraka amin'ny sakafom-borona matsiro!
Lasopy sy kitay
Ity fanangonana lasopy vita amin'ny lasopy sy lasopy ity dia manana izay ilainao rehetra hamoronana sakafo matsiro sy mafana ary mampionona izay tonga lafatra amin'ny taona rehetra!
Ity fanangonana sakafom-pisakafoanana lovia lehibe ity dia misy ny zavatra ilainao rehetra, manomboka amin'ny sakafo hariva sy kaserôla mora foana ka hatramin'ny lovia faran'ny herinandro matsiro!
Ny tsindrin-tsakafo no ankafizin'ny tsirairay amin'ny sakafo! Ireny fomba fanamboarana tsindrin-tsakafo mamy sy mora ireny dia azo antoka fa hamerina anao mandritra ny segondra… na ampahatelony!
Manomboka amin'ny cheesy Instant Pot Mac sy Cheese ka hatramin'ny Corned Beef Hash ka hatramin'ny Cream Cheese Brownies dia mizaha fomba fahandro an-jatony amin'ny sokajy am-polony. Tadiavo ny fivorianao manaraka na ny sakafom-pianakavianao miaraka amin'ny fomba fahandro efa voadinika izay tsara amin'ny tsiro ary fohy amin'ny dingana fanomanana!
Ireny fomba fahandro salady mora sy vaovao ary matsiro ireny dia hanova lovia ara-pahasalamana mahazatra ho sakafo hariva tsara indrindra anananao!
Ho an'ny fomba fahandro haingana sy mora ary ambany kaloria, ny fryer fryer dia mahatonga izay endasina matsiro sy malefaka ary mahasalama kokoa, vita amin'ny menaka sy tavy vitsy kokoa!
Ireo resipeo zava-pisotro tonga lafatra ireo dia manomboka amin'ny zava-pisotro mangatsiaka ka hatramin'ny mafana, zava-pisotro misy alikaola na tsy misy alikaola, ary mahafinaritra taonina avokoa izy rehetra!
Haingana sy matsiro ny fomba fahandro hen'omby! Amin'ity famoriam-bola ity, mitadiava fomba fahandro tena tsara miampy mianatra misafidy, manala hatsiaka ary hen'omby volontany!
Ity fanangonana sakafom-pisakafoanana antoandro ity dia manana ny zava-drehetra avy amin'ny sakafo atoandro mora entina, sakafo atoandro, lasopy atoandro, salady, ary bebe kokoa amin'izay dia tsara foana ny fotoana fisakafoanana anao!
Lingo coupon sy Terminology
Manomboka amin'ny resipe-kena hen'omby ka hatramin'ny steak ary na dia ny henan'omby aza dia azo antoka fa lasa foto-tsakafo manodidina ny tranonao ireo fomba fanamboarana hena mora ireo!
Sakafo lehibe tsy misy hena
Ny lovia lehibe tsy misy hena dia mety amin'ny alatsinainy na amin'ny andro isan-kerinandro. Izy ireo dia feno proteinina ho an'ny sakafo matsiro sy matsiro izay ankafizin'ny fianakaviana manontolo!
Ity fanangonana fomba fahandro salady pasta mora sy matsiro ity dia hanana izay ilainao amin'ny potluck na fandrahoana sakafo manaraka anao!